निषेधाज्ञा गराएर जनतालाई भित्रको भित्र र बाहिरको बाहिर गराएर देश चल्दैन् : टोपबहादुर रायमाझी « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
निषेधाज्ञा गराएर जनतालाई भित्रको भित्र र बाहिरको बाहिर गराएर देश चल्दैन् : टोपबहादुर रायमाझी
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले भोलि बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा मूलतः कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा केन्द्रित रहेर छलफल हुने स्पष्ट पारेका छन् । बुधबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्,‘पार्टीलाई विचार र विधि अनुसार चलाउनुपर्छ ।
पार्टीलाई व्यक्तिगत रूपमा चलाउनु हुन्न भन्ने कुरामा आन्तरिक बहस छ, यो आम विषय नै हो । यो सैद्धान्तिक विषय हो । पार्टीलाई अब विचार र विधिमा लैजानैपर्छ । संस्थागत रूपमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ । एजेण्डा अनुसार सरकार र पार्टीलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै द्धिविधा हुँदैन । त्यो बहसबाट हामीले निष्कर्ष निकाल्न आवश्यक छ ।’ प्रस्तुत छ नेता रायमाझीसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठक फेरि पनि भोलीबाट सुरु हुँदैछ ? एजेण्डा के-के छन् ?
मुख्य गरी हाम्रो पार्टीसँग जति सम्बन्धित विवादहरू छन्, त्यो कार्यदलले जुन किसिमका एजेण्डाहरू लिएर आएको छ, त्यसलाई बैठकबाट सम्बोधन गर्ने एजेण्डा छ ।
त्यसो भए कार्यदलकाको प्रतिवेदन पारित हुन्छ ?
त्यो हुने सम्भावना बढी छ ।
प्रतिवेदन अनुसार पार्टी अगाडि बढ्छ कि त्यहाँ पनि झेल हुन्छ ?
मुख्य गरिकन अहिले प्रतिवेदनको मूल आधारमा केन्द्रविन्दुमा राखेर बहस हुन्छ । त्यसपछि समस्याहरू र सम्भावनाहरू त आईनै रहन्छन् । त्यसमा बहस र छलफल गर्दै जाने र त्यसलाई समाधान गर्दै जाने दिशातर्फ अगाडि बढ्छौँ ।
अब मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुन्छ कि हुँदैन ? मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुन्छन् कि हुँदैनन् ?
पहिलो त पार्टी एकतासम्बन्धी र वैचारिक राजनीतिक तथा सांगठनिक एजेण्डाहरूमा मुख्य गरिकन छलफल हुन्छ । त्यसपछि प्रदेश सरकारको प्रभावकारितालाई कसरी अगाडि बढाउने ? पुनर्गठन गर्ने कि नगर्ने सम्बन्धमा कुरा भएपछि त्यसपछि मात्र छलफल हुन्छ । के पाउने, के दिने र के गुमाउने भन्ने कुरामा विवाद गर्नुपर्ने विषय होइन ।
संघीय गणतन्त्र प्राप्त भईसकेपछि कार्यान्वयन गर्नेदेखि लिएर देशको समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढ्दै जाने सन्दर्भमा हामी एकैपटक देशका ठुला पार्टीहरूको एकता, त्यसपछि निर्वाचन गराउनेसँग सम्बन्धित विषयहरु र झण्डै दुईतिहाई बहुमतको सरकार, जनमत, त्यसलाई फेरि सरकारमा बदलेर कानून निर्माण गरेर विकास र समृद्धिलाई तीव्रता दिने हामीलाई दोहोरो—तेहेरो जिम्मेवारी आईपरेको हुनाले हाम्रा पार्टीका अधुरा कामहरू पूरा गर्ने र प्रभावकारी बनाउने विषयमा जुन किसिमका कदमहरू थिए, त्यसमा चुनौती र समस्याहरूको समाधान गर्दै अगाडि बढ्छौँ । त्यसमा विवाद सिर्जना भयो । विवादले पार्टी विभाजनतिर लैजान्छ । त्यसकारण अहिले पार्टी एकता अनिवार्य छ । पार्टी एकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निकास निकाल्न हामीले बहस गरेका छौँ ।
पार्टी संस्थागत रूपमा जान्छ ? विधि र विधानअनुसार जान्छ कि के हुन्छ अब ?
पार्टीलाई विचार र विधि अनुसार चलाउनुपर्छ । पार्टीलाई व्यक्तिगत रूपमा चलाउनु हुन्न भन्ने कुरामा आन्तरिक बहस छ, यो आम विषय नै हो । यो सैद्धान्तिक विषय हो । पार्टीलाई अब विचार र विधिमा लैजानैपर्छ । संस्थागत रूपमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ । एजेण्डा अनुसार सरकार र पार्टीलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै द्धिविधा हुँदैन । त्यो बहसबाट हामीले निष्कर्ष निकाल्न आवश्यक छ ।
त्यसो भए रेलको कुरा गर्दा रेलमा पनि झेल भयो । अरबौँको खेल भयो । फेरि रद्द भयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू कोही पनि बोलेनन्, किन हो ? देशमा तपाईहरूले किन ब्रह्मलुट गर्नुहुन्छ ?
जहिलेपनि सरकारमा हुँदा होस्, नहुँदा होस्, एउटा संक्षिप्त प्रतिष्पर्धा गराएर जानुपर्छ भन्ने नै मूल्याकंन गर्नुपर्छ । यसमा कति चलखेल हुन्छ, म भन्न सक्दिन्ँ । तरपनि यसमा आम रूपमा विरोध भयो ।
रेलको ठेकापट्टा रद्द भयो । ३३ अर्बको भागबण्डा, हाम्रो देशमा ?
त्यसमा चलखेल भयो, के भयो भन्ने कुरा त्यो दोस्रो कुरा हो । तर त्यो हामीले विधि, प्रक्रियाको आधारमा विकास र समृद्धिप्रति हामीले गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । त्यसैले अहिले त्यो रद्द भएको राम्रो भयो ।
तपाई पनि भष्ट्राचार विरोधी नेता हुनुहुन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनिसक्यो तर पनि भ्रष्ट्राचार बढि नै रहेको छ नि त ?
कति भ्रष्ट्राचार भयो, त्यो मैले भन्ने भन्दापनि त्यसको लागि जिम्मेवार निकायहरू छन् । हामीले विधिसंगत तरिकाले स्वच्छ र पारदर्शी तरिकाले देशप्रति जिम्मेवार भएर परिणामुखी काम गर्नको लागि हामी त्यो दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि ३ वर्षदेखि रोकिएको जमिनको कित्ता फेरि पनि फिर्ता भयो । किन सरकारले यस्तो निर्णय गर्छ ?
अब त्यो कुरा के आधारमा गरियो मैले राम्ररी बुझेको छैन । हिजोमात्र मैले सुनेँ । सायद अब त्यस विषयमा पनि हामीले स्थायी कमिटिमा छलफल गर्छौ र सरकारमा पनि छलफल होला । संस्थागत रूपमा हो कि व्यक्तिगत रूपमा हो, त्यो विषयमा पनि गम्भीर छलफलको आवश्यकता छ ।
होइन पार्टीभित्र नै विरोध भएको छ । यो गलत निर्णय भयो, कित्ताको कुरा भनेर । बेमौसमको बाजा ? नियमावली अनुसार जानुपर्छ नि होइन ?
त्यसमा हामीले गम्भीर रूपमा छलफल गर्छौँ र हामीले एउटा विज्ञप्ती निकाल्छौँ ।
साउदीमा नेपालीहरू अलपत्र परे । सरकारविरुद्ध उनीहरू उत्रिए । तपाईँहरू किन उनीहरूलाई ल्याउनुहुन्न, नेपाल ? कोरियामा पनि त्यस्तै छ । नेपाल आउन नपाएका नेपालीहरूको विचल्ली ?
यो एउटा कोरोनाको महामारी छ । विश्वव्यापी रूपमा मानवीय क्षतिको विषय बनेको छ । विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले तहसनहस नै पारेको छ । यो नेपालको लागि मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा नै मानव जातिको लागि ठुलो घातक रोगको रूपमा देखा परिरहेको छ । अब यसको विरुद्धमा लड्नको लागि सरकारमात्र लागेर हुँदैन । सम्पूर्ण पार्टीहरू, सेवकहरू, सामाजिक संघ/संस्थाहरूले सम्पूर्ण आम नेपाली जनतालाई एकीकृत र केन्द्रिकृत गर्न यसको अभिमानमा लड्नपर्ने हाम्रो आवश्यकता छ ।
त्यसो भए उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रहरू चाहिन्छ, पोलिटिकल पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई राखेर ?
राजनीतिक संयन्त्र भए पनि, नभए पनि त्यो सरकारले महशुस गर्ने कुरा हो । जसरी भए पनि राज्यलाई यो महामारीको विरुद्ध विचार र योजनामा निरन्तरता कार्यक्रममा केन्द्रित गरेर वैज्ञानिक किसिमले हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
लकडाउन र निषेधाज्ञाले करिब–करिब २ लाख व्यवसाय सधैँको लागि बन्द भएका छन् । किन सरकारको त्यसबारेमा ध्यान गएन ?
यो महामारी कति महिना वा कति वर्षसम्म जान्छ भनेर टुंगो छैन । कसैले पनि भविष्यवाणी गर्नसक्ने स्थिति छैन । त्यसैले ‘स्टे विथ कोरोना’ भनेर मैले सुरुदेखि नै उठाएको छु । हामी कोरोनासँगै संघर्ष गर्दै विश्वको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त, धरासयी हुनबाट रोक्नको लागि हामीले कोरोना भाइरसको विरुद्ध मेडिकल दृष्टिकोणबाट निर्धारण गरिएका स्वास्थ्यका नियमहरूलाई पालना गर्दै देशको विकास र समृद्धिको कामहरूलाई अनुशासित रूपले यसमा हामीले वैज्ञानिक तरिकाले परिचालित गर्न सक्नुपर्छ ।
नाकामा सेना परिचालन गरेर निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन उपत्यकाका मेयरहरूको पनि प्रस्ताव छ । तपाई के भन्नुहुन्छ ?
यसलाई निषेधाज्ञा गराएर, टाइट गरेर भित्रको भित्र र बाहिरको बाहिर गराएर देश चल्दैन । यसलाई वैज्ञानिक विधिको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । अनुशासन र नियमहरू पालना गरेर कोरोनाको विरुद्धमा लड्ने देशको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त हुनबाट रोक्ने हामीले नयाँ योजनाको सुरुवात गर्नुपर्दछ ।
प्रकाशित मिति : भाद्र २७, २०७७ शनिबार १२ : ५६ बजे
दलहरुले स्वतन्त्रको सामना कसरी गर्ने भनेर सोच्ने बेला आयो : रञ्जु दर्शना [अन्तर्वार्ता]